Xayla Sillaase: Taallo lagu xusuusto ayaa looga taagay Xaruunta Midowga Afrika ee Addis Ababa - BBC News Somali
Xayla Sillaase: Taallo lagu xusuusto ayaa looga taagay Xaruunta Midowga Afrika ee Addis Ababa
Image caption Shir sanadeedka midowga Afrika oo lagu daah furay taallo loo dhisay Boqor Xaylasillaase
Boqorki ugu dambeeyey ee soo mara dalka Itoobiya ayaa Taallo looga taagay xaruunta Midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa.
Midowga Afrika (AU) ayaa sheegay in Boqor Xayle Sillaase taallada looga dhisay afaafka hore ee dhismaha xaruunta midowga iyada oo lagu maamuusayo doorka uu ku lahaa aasaaska Ururka Midowga Afrika (OAU).
Balse magaca Xayle Sillaase ma aha mid dad badan ku cusub oo waxaa lala xidhiidhiyaa heesaaga dalka Jamaica u dhashay ee Bob Marley iyo kooxda Raas Tafariyaan lagu magacaabo.
Haddaba maxaa keenay iney Xayla Sillaase caabudaan ummad kumannaan kiilo miitir ka fog dalka Itoobiya.
Taallo muxuu ku muteystay?
Boqor Xayla Sillaase wuxuu dalka Itoobiya boqor ka ahaa in ka badan 40 sano, inta uu talada dalka hayeyna wuxuu kaalin mug leh ku lahaa in la aasaaso Ururki Midowga Afrika (OAU). Shirki ugu horreeyey ee OAU waxaa Addis Ababa lagu qabtay sannadkii 1963-kii.
Dalka Itoobiya oo ah dal aan weligii la guumeysanin waxaa muddo shan sano ah awood militari ku haystay Talyaaniga, wuxuuna dalka Itoobiya Afrika u ahaa dal astaan u ah xorriyadda dadka madowga ah muddadi waddamada kale ee Afrika ay guumeystayaashu haysteen.
Xilligii midowga Afrika uu shirkiisii ugu horreeyey ku yeeshay Addis Ababa wuxuu Xaylasillaase shirka ka sheegay "in dalkiisu martigelinta shirka OAU ee ugu horreeya uu muddo sanad ah u diyaar garoobayey".
Image caption Xayla Sillaase boqorki ugu dambeeyey ee Itoobiya
Ururka Midowga Afrika oo horay magaciisa loogu soo gaabin jiray (OAU) wuxuu markii dambe noqday Midowga Africa (AU) markii ay taariikhdu ahayd 9-kii bishii Juulyo ee sannadkii 2002-dii.
Inkasta oo uu magaca isbeddalay haddana doorka asaaska ururka Midowga Afrika ma noqon mid la illaawo waana tan keentay in Xayla Sillaase Taallo loo sameeyo.
Maxaa keenay in dad Jamaica u dhashay ay Xayla Sillaase caabudaan?
Arrintan ayaa waxay timid 1920-kii marki uu nin Jamaica u dhashay oo u ol'oleeya xuquuqda dadka madowga ah oo lagu magacaabo Marcus Garvey, uu taageeryaashiisa kula dardaarmay iney Afrika isha ku hayaan oo haddii 1930-ka la doorto boqor Afrikaan oo madow ah ay ninkaasi raacaan.
Image caption Dadka Raastfarian waxay aaminsan yihiin in Xayla Sillaase uu Masiix yahay
Kaddib marki ay dadki madowga ahaa ee xilligaasi noolaa arkeen in Xayla Sillaase uu boqor ka noqday Itoobiya waxay xaqiiqsadeen hadalkii Marcus Garvey uu 1920-kii kula sii dardaarmay.
Ras Tafari oo ah naaneysta Xayla Sillaase oo dadka isaga taabacsan loogu magac daray, wixi xilligaa ka dambeeyey dad ku nool 8,000 mile galbeedka badda India waxay aamineen inuu yahay Masiixigi ay sugayeen, Itoobiyana ay tahay waddan barakeysan waxaana soo billaawday dhaqdhaqaaqa Rastafarian.
Image caption Fannanka reer Jamaica Bob Marley
Saddex sano ka dib marka ay aasaasantay Kooxda Rastafarian ee aaminsan Xayla Sillaase waxay yimaaddeen dalka Itoobiya wuxuuna boqor Xayla Sillaase siiyey dhul wuxuuna dajiyey magaalada Shaashamanne oo ku taalla Koonfurta dalka Itoobiya.
Boqor Xayla Sillaase qof noocee ah ayuu ahaa?
Fikirka ku saabsan Xayla Sillaase inuu ahaa boqor wanaagsan ama xun aad ayey muwaaddiniinta dalka iyo hay'adaha caalamigaba ugu kala duwan yihiin.
Hay'adda Human Right Watch waxay Xayla Sillaase ku eedeysay inuu ahaa boqor "qariyey gaajada iyo macluusha ka dhacday dalka Itoobiya intii u dhaxeysay 1972 ilaa iyo 1973-kii, xilligaasoo ay dad badan ku dhinteen, kuwaasoo tiradooda lagu qiyaasay ugu yaraan 200,000 oo qof".
Image caption Boqor Xaylasillaase iyo Madaxweynaha Ghana Kwame Nkrumah oo labaduba door ku lahaa aasaaska Midowga Afrika
Aqoonyahan Yohannes Woldemariam ayaa wuxuu isna ku doodayaa Xayla Sillaase in lagu xusuusto inuu ahaa kaligiitaliye dhiig shacab oo aad u badan daadiyey.
Halka ay taageerayaashiisuna ku doodayaan inuu ahaa hoggaamiya sare, ilbax ah oo Afrika ku matalay shirarka caalami ah xilli waddamada madowga ah ay gacanta ugu jireen gumeystayasha reer galbeedka.
Boqor Xayla Sillaase wuxuu dalka Itoobiya boqor ka soo ahaa 44 sano oo u dhaxeysay 1930-kii ilaa iyo 1974-kii.